Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland oo soo xirtay shir lagu qorayey Manahjka Farsamada Gacanta ee Puntland. – Ministry of Education in Puntland
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland oo soo xirtay shir lagu qorayey Manahjka Farsamada Gacanta ee Puntland.
By editor	/ August 27, 2017
26/Agosto/ 2017- Waxaa maalintii arbacada ahayd magalada Garowe ee caasimada Puntland lagu soo xiray shirwayne ballaaran kaasoo lagu qorayay manhajka waxbarashada farsamada Gacanta ee Puntland.
Shirkaa ayaa socday mudo 5 maalmood ah waxaa xiritaankiisa kasoo qayb galay , ,Wasiirka Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare, Wasiir k xigeenka iyo Agaasiama guud iyo agaasimaha waaxda Farsamada Gacanta iyo masuuliyiin kale oo khibrad dheer u leh waxbarashada Farsamada Gacanta sidoo kale waxaa goobjoog ahaa shirkan qaybaha kamid ah Xarumaha Farsamda gacanta iyo masuuliiin kale.
Agaasimaha Waaxda mashaariicda Tababarda iyo Farsamada Gacnata Abdulahi Axmed ayaa xiritaankiisa ka hadlay Manahjka Qoraalkiisa iyo sida loo soo Abaabulay waxaana uu sheegay in uu khuboro ku xeel dheer manhjka farsamada Gacanta ka keeneen Dalka Kenya ahna macalimiin wax ka bara jaamacada farsamada Gacanta ee Kenya ( Technical University of Kenya) iyo khubaro reer Puntland ah oo iyaguna lahaa hogaamina iyo tala bixinta manhajka. Waxaa uu kaloo sheegay in hada la dhamaystiray qoraalka shan xirfadood oo la dhamaystiray sadex heer iyo diploma waxayna kala yihiin: Auto-mechanic, Metal fabrication, Carpentry and joinery, Tailoring, Electronics and communications.
Agaasimaha Guud ee Wasaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare Maxamed C/qaadir Cismaan ayaa sheegay inay u ahayd ahmiyad gaar ah u lee dahay sidii loo qori lahaa Manhajka waxbarashada farsamada Gacanta ee Puntland, ayna qayb ka tahay hiigsiga waxbarashada Puntland, wuxuna meesha ka xusay inay juhdi iyo dadaal faro badan galiyeen manhajkani.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntlan Dr Maxamed Cali Faarax ayaa sheegay inay tahay arrinta shirkan loo fadhiyey arrin Qaran, isla markasna diyaarinta Manhajkani Farsamada gacanta ay ka qayb galeen saraakiil bulshada matalaysa.
“Dadaalkeena mustaqbalka dhow wuxuu yahay in arday walba oo reer Puntland uu helo buug maado kasta ah oo lagu qoray manhajka Farsamada Gacnta ee Puntland,”ayuu yiri Wasiir ku xigeenka oo intaas sii raaciyay inay wasaaraddu mar walba dib u eegis ku sameyndoonto manhajkaan haddii loo baahdo.
Kasoo qayb galaayaasha iyo khubarada shirkan ay inay fikirkrado badan ka dhiibatay qaabka loosoo diyaarshay qaab dhismeedka Manhajka farsamada Gacnata Puntland.
Wasiika Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare Prof Abshir yuusuf Aw Ciise ayaa khudbad dhinacyo badan taabaysa kasoo jeediyay shirka oo ay kasoo qayb galeen in ka badan 50 -qof oo ka kala yimi gobaladda Puntland, wuxuna sheegay inuu ku faraxsan yahay diyaarinta qaybo ka mid ah manhajka Farsamada Gacanta waxbarashada Puntland.
Wasarada waxbarashada iyo tacliinta sare waxaa gacan ka geeysatay Hay’ada Save childaren.